Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Yann Sommer Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị Yann Sommer na -akọwa akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, ezinụlọ, ụdị ndụ ya, nne na nna (Daniel na Monika), nwunye (Alina), ndụ onwe onye na ọnụ ahịa net.
N'okwu dị mfe, ọ bụ akụkọ ndụ onye mgbaru ọsọ, site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mebie agụụ akụkọ ndụ gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo ebe okenye - nchịkọta zuru oke nke Yann Sommer Bio.
Akụkọ banyere Yann Sommer. Lee akụkọ ndụ ya na ebilie.
Ee, anyị niile maara oge mmetụta dị na Euro 2020 mgbe ọ zọpụtara ntaramahụhụ Kylian Mbappe iziga Switzerland na agba nke anọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụla Bio ya, nke bụ ihe na -atọ ụtọ. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ gbasara ụmụaka Yann Sommer:
Akụkọ nwata nke onye mgbaru ọsọ a na -asọpụrụ si Switzerland.
Maka ndị na -amalite Biography, aha otutu ya adịghị iche na aha mbụ ya. Yann Sommer mụrụ na ụbọchị 17 nke Disemba 1988 nye nna ya, Daniel Sommer na nne ya, Monika Sommer, na Morges, Switzerland.
Eleghị anya ọ bụ naanị nwa amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya ka esere ya n'okpuru. Sommer nwere ọmarịcha nwata nwere ncheta oge dị mma ya na nna ya na nne ya nọ.
Oge ya na nna ya laghachiri n'oge ochie. N'ezie, ya na nne na nna ya emeela ọtụtụ ncheta.
Mgbe ụfọdụ, ọ na -eso nna ya aga ọdọ mmiri, ebe ha abụọ na -atụle ebumnuche ya. N'agbanyeghị na ọ dị obere, Sommer ekwenyelarị na ya ga -eme nke ọma na bọl.
N'ihi ya, ọ gwara nna ya gbasara ọchịchọ ya ịbanye na egwuregwu wee rụtụ aka kpọmkwem na ọ chọrọ ịbụ onye mgbaru ọsọ. N'ụzọ na -akpali mmasị, Daniel gere ntị na nrọ nwa ya na obi ghere oghe ma chee ụzọ ọ ga -esi mee ya.
Site ozugbo ọ batara n'ụwa, nne na nna Sommer ji ịhụnanya nke ukwuu mesoo ya. Ọ bụ apụl anya ha na ngọzi nke na -egosipụta ịdị adị nke ịhụnanya ha.
Nwatakịrị nwoke ahụ tolitere na nne na nna ya nwere oke mmasị. N'otu oge, a hụrụ ya ka ọ na -enye papa ya ọtụtụ ajụjụ. E mesịa, ị ga -ahụ ya ka ọ nọ ọdụ n'etiti nne ya. N'okpuru ebe a bụ onyonyo tụfuru nke na -echeta ụbọchị ọma ọ bụ nwata.
Ọ pụghị ịnagide ịnọpụ nne ya. Ọ dị mkpa dị ka oxygen nye onye na -eto eto champ.
Akụkọ gbasara ezinụlọ Yann Sommer:
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye mgbaru ọsọ ahụ si n'ezinụlọ hụrụ udo n'anya nke na-ebute ihe ịga nke ọma ezinụlọ na ịdị n'otu ụzọ karịa ihe ọ bụla. Moreso, njikwa ya enweghị ndekọ ndekọ maka ụdị omume ọjọọ ọ bụla ma ọ bụ ikpe na -ezighị ezi.
O doro anya, nna na nne Sommers bụ ndị na-arụsi ọrụ ike na-anaghị ewepụta oge maka asịrị. Ha na -enweta ego ha n'ụzọ iwu wee jiri ya rụọ ọrụ nke ọma iji zụlite nwa ha nwoke.
Kedu ihe ọzọ?… Ezinụlọ ya nwere okpukpere chi. Iji bụrụ nke ziri ezi, ha bụ ndị Katọlik wee zụlite nwata nwoke ahụ na okwukwe ha.
Isi ezinụlọ Yann Sommer:
Kemgbe o biliri na kpakpando, ọtụtụ ndị egwu ya nọ na -achụgharị agbụrụ ya. Ụfọdụ na -achọ ozi a ka ha mara ma ha bụ ndị otu agbụrụ dị ka Sommer.
Ọ bụ ezie na ndị ọzọ chọrọ ịma ma ọ bụrụ ihe nketa ya bụ ihe na -atụnye ụtụ n'ịma mma ya. Eziokwu bụ, Sommer bụ nwa amaala Switzerland nke nwere ezi ndụ na nwa amaala Morges, ebe amụrụ ya.
Maapụ ahụ na -egosi ebe mmalite nke Yann Sommer.
Ebe amụrụ ya dara na mpaghara na -asụkarị French, nke bụ otu n'ime isi asụsụ anọ a na -asụ na Switzerland. Ikekwe, ọ mụtala ikwu okwu atọ ndị ọzọ (Italian, Romansh na German) mgbe ọ na -etolite.
Yann Sommer Mmụta:
N'agbanyeghị nrọ ya nke ịbụ onye na -eche nche, nwata nwoke ahụ ga -aga ụlọ akwụkwọ. Ndị mụrụ ya gbara mbọ hụ na ọ nwetara agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị dịka ụmụaka ndị ọzọ nọ n'obodo ya. Ha kwenyere na ọ ga -enwe nhọrọ ọzọ ịbanye na ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na egwuregwu emeghị nke ọma.
Akụkọ gbasara bọọlụ Yann Sommer:
Mgbe onye mmeri bụ obere nwa, nne na nna ya chọrọ idebanye ya n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ. N'ụzọ dị mwute, enweghị ụlọ akwụkwọ ịgba ọsọ maka ndị na -amalitebeghị ịga ụlọ akwụkwọ n'oge ahụ.
Agbanyeghị, nna ya mere ka ọ sonye na ntọala ndị ntorobịa emepere emepe maka ụlọ akwụkwọ ọta akara na FC Herrliberg. Ọ malitere ọzụzụ dị ka onye na -eche nche ma mee ike ya niile ka ya na ndị otu ahụ too.
Ka ọ na-erule elekere 7, Sommer na ndị otu ya enwetala ihe nrite ọla n'ọsọ asọmpi na Zurich-Unterstrass. N'oge na -adịghị anya otu afọ gachara, ọ kwagara Concordia Basel ka ọ gaa n'ihu na mmepe ọrụ ya.
Inweta mmeri nrite mbụ nke ọrụ ya nyere ya mmetụta nke mmezu. Moreso, ọ manyere ya ịrụsi ọrụ ike maka ụbọchị otuto karịa.
Ndụ Ọrụ Ndụ mbụ Yann Sommer:
Ruo afọ 6, akara ngosi Switzerland rụsiri ọrụ ike iji meziwanye ntụgharị uche ya, ike ya na nhazi anya anya ya. Ka ọ na -etolite nke ọma n'ịche ihe mgbaru ọsọ, nna ya na -achọ ohere iji mee ka ọ banye na klọb a ma ama.
O debere ọkwa dị iche iche na ndị otu ọkwa dị elu wee soro nwa ya nwoke nwalee ọnwụnwa ha. Sommer mechara sonye na ntọlite ​​ntorobịa nke Basel na 2003. O were ya afọ abụọ nke ọzụzụ na -agwụ ike ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Basel.
Malite na klọb U-21 nke klọb ahụ, goalie ahụ gafere ndị asọmpi ya ngwa ngwa wee banye n'usoro mmalite otu ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ ghọrọ nhọrọ nke atọ nke ndị otu ha. Lelee otu ntaramahụhụ ya dị egwu na -azọpụta n'oge ọrụ ya.
Yann Sommer Biography - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
N'ihi nkwalite ya, ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta afọ anọ na Basel na 2007. Agbanyeghị, e zigara ya Vaduz mbinye ego iji nyere ya aka nweta ahụmịhe otu egwuregwu mbụ. Dị ka atụ anya, Sommer gosipụtara dị ka onye mgbaru ọsọ mbụ na Vaduz.
Inweta oge igwu egwu dị ka onye nlekọta nke mbụ mere ya obi ụtọ.
Ọrụ ya bụ ihe ịtụnanya wee nyere klọb aka inweta nkwalite na Njikọ Njikọ nke Switzerland na 2008. Mgbe ọ laghachitere na klọb nne na nna ya, Sommer gosipụtara naanị na egwuregwu 6 tupu eziga ya na mbinye ego ọzọ na Grasshopper.
O juru onye ọ bụla anya na ọ nọ n'ọkwa kachasị ọhụrụ na klọb ọhụrụ ya wee gbuo ọtụtụ nzọpụta dị egwu. Nke a mere ka ọ laghachi Basel ngwa ngwa mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta afọ 5 ọzọ na 2010.
Yann Sommer Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
Afọ ndị sochirinụ ọrụ bọọlụ ya hụrụ ya ka ọ dabara n'usoro klọb ya. Ọ ghọrọ akụkụ nke otu meriri Switzerland Super League anọ na-esote wee mee ya na ọkara ikpeazụ nke Njikọ Njikọ.
Imeri na -eme ya obi ụtọ nke ukwuu ma na -akwali ya ịrụsi ọrụ ike maka inwekwu mmezu
Agbanyeghị, Chelsea ji mkpokọta 2-5 merie ha. Mgbe ọ gara nke ọma na Basel, Sommer kwagara Borussia Monchengladbach na nkwekọrịta afọ 5 na Machị 2014.
Edebanyere ya na klọb ahụ ka ọ bụrụ onye nnọchi ya Marc-Andre ste Stegen, onye hapụrụ Barcelona. N'oge mbụ ya, onye na-eche nche nyere Gladbach aka imecha 3rd na oge 2014-15.
Nke a ghọrọ asọmpi kachasị elu ha kemgbe 1978 wee nweta Sommer onye ọkpụkpọ otu egwuregwu. Ka m na -edekọ akụkọ ndụ a, ọ gbatịkwuru nkwekọrịta ya na Gladbach ruo 2023.
Onye dike Switzerland na Euro 2020:
N'ime afọ ole na ole gara aga nke nnukwu ọrụ ya, onye na-akwụsị ogbugbu emeela mba ya ọtụtụ ngosi. Ka o sina dị, arụmọrụ ya n'oge asọmpi Euro 2020 karịrị ụbọchị mbụ nke okpu mba ụwa ya.
Nke mbu, o duuru Switzerland banye na nkeji iri na ise mgbe ọ chebere ntaramahụhụ n'aka Kylian Mbappe n'oge ịgba ntaramahụhụ. N'oge egwuregwu ha na -esote Spain, Sommer zọpụtara 8 dị mkpa na mgbakwunye oge wee nye ndị otu ya olileanya imeri.
N'ụzọ dị mwute, ọ pụghị ịrụ ọrụ Unai Simon n'oge ịgba ntaramahụhụ. N'ihi ya, a kpụpụrụ mba ya n'asọmpi ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwunye Yann Sommer:
Laa azụ na 2011, onye ọkpụkpọ Switzerland malitere ịlụ ọmarịcha onye na -eme ihe nkiri aha ya bụ Sabrina Meie. Ha hụrụ ibe ha n'anya ma na-ede akwụkwọ maka ihe dị ka afọ atọ tupu ntisa mberede ha na 2014.
Ọbụlagodi ọtụtụ afọ agafeela, onweghị onye n'ime ndị hụrụ n'anya nke kwuputara ihe kpatara nkewa ha. N'okpuru bụ foto ochie nke na-egosi ụfọdụ ncheta obi ụtọ na-ekerịta n'etiti Sommer na enyi nwanyị mbụ ya.
Nlaghachi azụ na mmekọrịta mbụ Sommer na enyi nwanyị mbụ ya, Sabrina Meie.
Na 2016, onye mgbaru ọsọ ahụ malitere ịlụ Alina. O mere ike ya niile ka mmekọrịta ọhụrụ ya na -aga nke ọma. Enyi nwanyị Sommer na -amụ iwu na Cologne, Germany, mgbe ha zutere.
Zute Yann Sommer na ọmarịcha enyi nwanyị ya tụgharịrị bụrụ nwunye, Alina.
Ihe dị ka afọ atọ n'ime mmekọrịta ha, Alina tụụrụ ime. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, nnụnụ ịhụnanya ahụ kekọtara eriri dị ka di na nwunye n'August 2019. N'ụzọ na-akpali mmasị, ha abụọ nabatara nwa mbụ ha na Nọvemba n'afọ ahụ.
Ọmụmụ nwa ha nwanyị bụ nnukwu ozi nye ezinụlọ ha niile. Sommer kpọrọ ya Mila ma gbalịa i imitateomi nna ya site n'inwe oge dị ukwuu na ezinụlọ ya. Akụkọ nwere ya na onye mgbaru ọsọ na nwunye ya na -atụ anya nwa ha nke abụọ na 2021.
Sommer na nwunye ya na -eso nwa ha nwanyị egwu egwu. Ha hụrụ ya n'anya karịa ihe okwu nwere ike ịkọwa.
Ndụ Nkeonwe Yann Sommer:
Gịnị na-eme onye mgbaru ọsọ aghụghọ nke ndị otu mba Switzerland oké?… Iji malite, onye ya bụ ngwakọta nke agwa zodiac Sagittarius. Ọ na -enwe obi ụtọ, ọ na -ejikọkwa ya na ndị mmadụ n'ụzọ dị mfe. Anya ya mara mma bụ àgwà pụtara ìhè nke na -akọwa ụdị onye ọ bụ.
N'oge ezumike, Sommer na -eso ndị enyi ya aga ọdọ mmiri. N'ebe ahụ, ha nwalere usoro igwu mmiri dị iche iche iji hụ onye kacha egwu mmiri n'etiti ha. Foto dị n'okpuru bụ klaasị mara mma nke na -egosi goolu dị ka nnukwu mmadụ.
Ọ dị ka nka ya na ọpụrụiche ya na pitch bịara inye aka mgbe ọ mikpuru n'ime mmiri.
N'ezie, ọ nwere nnukwu uwe nke na -eto mma ya. Ike agwụbeghị ndị na -ekiri foto ya ogologo ụbọchị niile. Na mgbakwunye na ọtụtụ agwa ya, Sommer bụ ọmarịcha osi nri na onye na -akụ ụbọ.
Mgbe ọ bụla ọ nọghị n'ọhịa, ị ga -ahụ ya ka ọ na -akpọ ụbọ.
Eziokwu Ndụ Ndụ Yann Sommer:
Ọmarịcha ọmarịcha ya mara mma nke ukwuu ma mee ka ọ dabara maka ịme mkpọsa vidiyo. N'ime ọtụtụ afọ, Sommer akwalitela ọtụtụ ụdị okomoko. Nke a bụ vidiyo n'azụ ihe nkiri nke otu mgbasa ozi ya na skysportch.
Site na nnukwu ego ọ na -enweta, onye mgbaru ọsọ ahụ anaghị anapụ onwe ya afọ ojuju na -esite n'ịzụta akụ dị oke ọnụ. N'ezie, ndụ ya yiri nke Granit Xhaka, ebe ha abụọ na -enwe mmasị idobe nchịkọta ụgbọ ala ndị mara mma.
Lelee otu n'ime ọmarịcha ịnya ụgbọ ala Sommer na foto dị n'okpuru. N'ezie, ọ na -enweta uru nke ịrụsi ọrụ ike ya na -agbanwe agbanwe.
Kedu ụzọ mara mma iji gosi ụgbọ ala okomoko ya. Ọ nwere ọtụtụ njem na nchịkọta ya.
Ezinụlọ Yann Sommer:
N'adịghị Kevin mbabu, onye na -eche nche na -enwe mmasị itolite n'ime ụlọ dị n'otu. Ọ nwetara nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya niile.
N'ihi nghọta dị n'etiti nna Sommer na nne ya, ọ gaghị echegbu onwe ya maka ịgba alụkwaghịm. Na ngalaba a, anyị na -ewetara gị akụkọ mara mma gbasara onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya, malite na nna ya.
Banyere Nna Yann Sommer:
Nna onye na -eme egwuregwu bụ Daniel Sommer. Ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ nke gosipụtara na FC Herrliberg. N'ụzọ dị mwute, ọ dịtụghị mgbe ọ rutere n'otu klọb a ma ama tupu ọrụ ya agwụ.
Foto na -adịghị ahụkebe nke onye na -eto eto na nna ya, Daniel Sommer.
Daniel hụrụ na ọ gafere nwa ya ụfọdụ nkuzi metụtara egwuregwu. Mgbe ụfọdụ, ọ ga -akpọrọ Sommer n'ọhịa ma mee ka ọ na -elele ọzụzụ ya ogologo ụbọchị niile. Nke nta nke nta, nwa okoro ahụ mụtara obere aka n'aka nna ya.
Banyere nne Yann Sommer:
Dịka anyị niile maara, ndị nne bụ ndị ogbugbo kacha mma na -ebugara nna ha ihe ụmụaka chọrọ. N'otu aka ahụ, Monika Sommer na -ahụ na di ya na -emezu ihe nwa ha chọrọ.
Zute nne ya, Monika Sommer. Ọ dị ka ọ ketara ọmarịcha ọnụ ọchị nne ya.
Ọ bịara nọrọ onye na -eche nche nso nke na ha abụọ nwere ike kparịta ihe ọ bụla gbasara ndụ ya. Enweghị ihe nzuzo dị n'etiti nne na nwa ya nwoke. N'ezie, ọ nwere ihe ndabara ọma dị ka Breel Embolo inwe nne na -eche maka mbọ ya na ọdịmma ya.
Banyere ụmụnne Yann Sommer:
Mgbe ọ gbasịrị ama, ọtụtụ ndị egwu bidoro nyocha ma ọ bụrụ na o nwere nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị mara mma dịka ya. Ha nwere nkụda mmụọ mgbe ha chọpụtara na o doro anya na Sommer bụ naanị nwa ezinụlọ ya.
N’echiche anyị n’eziokwu, ọ bụrụ na onye mgbaru ọsọ ahụ nwere nwanne nwanyị, ọ gaara abụ otu n’ime ndị mara mma na Switzerland. Agbanyeghị na o nweghị ụmụnne, Sommer enwekwaghị ike ọgwụgwụ n'oge ọ bụla na ndụ ya, ekele maka ezinụlọ ya na ndị enyi ya.
Banyere ndị ikwu Yann Sommer:
Ewezuga ndị mụrụ ya, onye na -eme egwuregwu nwere nkà etolitela nne nne ya. Ọ na -elekọta ya mgbe ọ bụla nne ya na -anọghị ya. Nne nne ya mere emume ncheta ọmụmụ 90th ya na 2019.
Eji nne ogologo ndụ gọzie nne nne ya. Obi dị m ụtọ na Sommer so ya mee ncheta ncheta ndị ọzọ.
Ka m na -achịkọta akụkọ ndụ a, enwebeghị ozi gbasara nna nna Sommer yana nwanne nna ya na nwanne nna ya. Agbanyeghị, anyị ji n'aka na ndị ikwu ya na -enwekwa nganga maka ihe ịga nke ọma o nwetara n'egwuregwu.
Eziokwu nke Yann Sommer:
Iji chịkọta akụkọ ndụ anyị nke onye mgbaru ọsọ Switzerland, nke a bụ eziokwu ole na ole ga -enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya.
Eziokwu # 1: Net Worth Ma Salary Ndakpọ:
Kemgbe ọ ghọrọ onye ama ama na Bundesliga, Sommer hụrụ ka ego ọ na -enweta na -arị elu ka oge na -aga. Nkwekọrịta ya na Monchengladbach na -etinye ya na ụgwọ ọnwa kwa izu nke € 55,000.
Anyị emeela atụmatụ na 2021 Net Worth ya bụ mkpokọta nde € 3. Lelee mmebi ụgwọ ọnwa nke onye mgbaru ọsọ dị n'okpuru.
Yann Sommer Borussia Monchengladbach ụgwọ ọnwa na Swiss franc (CHF)
Yann Sommer Borussia Monchengladbach nkwụnye ụgwọ Euro (€)
Kwa Afọ: 3,083,383 Swiss franc (CHF) € 2,864,400
Ọnwa kwa: 256,949 Swiss franc (CHF) € 238,700
Kwa Izu: 59,205 Swiss franc (CHF) € 55,000
Kwa :bọchị: 8,458 Swiss franc (CHF) € 7,857
Kwa elekere: 352 Swiss franc (CHF) € 327
Nkeji nkeji: 5.9 Swiss franc (CHF) € 5.5
Kwa Nke Abụọ: 0.097 Swiss franc (CHF) € 0.09
Site na nyocha anyị, nkezi nwa amaala Switzerland ga -arụ ọrụ otu afọ iji nweta ihe Sommer na -enweta n'ime otu izu. Anyị ejirila nlezianya gbakọọ ụgwọ ọnwa ya ka elekere na -akụ. N'okpuru bụ ego ole o mere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Yann Sommer's Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke abụọ: Okpukpe Yann Sommer:
Onye na -eme egwuregwu sitere na ezinụlọ nke Ndị Kraịst wee tolite na -amụ maka ntọala okwukwe ya. Ọ bụ onye Katọlik, dị ka nne na nna ya, ọ na -ewepụtakwa oge ịga uka.
Otu n'ime ọmarịcha ahụmịhe metụtara okpukpe nke o nweburu bụ izute poopu. O doro anya na obi dị ya ụtọ izute onyeisi Chọọchị Katọlik.
Kedu nnukwu ụbọchị na ndụ ya ka ọ na -ezute poopu Francis.
Eziokwu #3: Nkwado Maka Ndị Ọrịa Cancer:
Yann Sommer bụ onye ọrụ ebere nke nwere oke mmasị inyere ụmụaka na -arịa ọrịa aka. Ọ sonyeere Foundation for Children's Hospital - Stiftung Pro UKBB - na Basel. Ebumnuche ha bụ ịhụ na ụmụaka nwere ohere inweta ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Moreso, ha na -eme ike ha niile ka ụmụaka ụmụaka na -arịa ọrịa nọrọ n'ụlọ ọgwụ n'ọnọdụ kacha mma maka usoro ọgwụgwọ ngwa ngwa. N’ụbọchị ọrịa kansa ụwa nke 2019, Sommer gara ndị na -eto eto na -arịa ọrịa oncology n’ụlọ ọgwụ Mahadum ụmụaka na Basel.
Ọ nwere ekele ịkọrọ ndị ọrịa nwere obi ike ụdị oge a na -enye ọ joyụ na ume. N'oge ọnụnọ ya n'ụlọ ọgwụ, onye na -eche nche na -akpọ ụbọ ya wee bụọ ụmụaka ụmụaka na -alụ ọrịa kansa n'ụlọ ọgwụ.
Ụda egwu ya na -enye udo ụmụaka na -ege egwu ya.
Eziokwu # 4: FIFA stats:
N'ụzọ na -akpali mmasị, ọkwa 2021 ya karịrị nke onye ọkpụkpọ ọ bụla na ndị otu mba Switzerland. Ọbụghịdị Xherdan Shaqiri or Haris Seferovic nwere ike tụọ ogo ya na ike ya niile.
Sommer enwetala nnukwu mmeghachi omume na mmeghachi omume ngwa ngwa na gbaa. Ọzọkwa, ike ịwụ elu ya na-enye ya nnukwu uru karịa bọọlụ n'ofe igbe ya dị 18. N'ihi ya, ọ dị mma na igbochi ndị egwuregwu ịbanye bọọlụ na ikuku n'ihu ya.
Tebụl dị n'okpuru na -achịkọta akụkọ ndụ nke Yann Sommer. Ọ na -enye gị ike ịgụ ihe ncheta ya ngwa ngwa o kwere mee.
Aha n'uju: Yann Sommer
aha otutu: Yann
Age: 32 afọ na ọnwa 11.
Ụbọchị ọmụmụ: 17th nke December 1988
Ebe amụrụ onye: Mahadum Morges, Switzerland
Nna: Daniel Sommer
Nne: Monika Sommer
Nke bụbu nwaada nwanyị: Sabrina Meie
Ezigbo Net: Million 3 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 2.86 million (2021 Ọnọdụ)
Ihe omume: Ịkpọ guitar, igwu mmiri na isi nri
elu: 1.83 m (6 ụkwụ 0 sentimita asatọ)
Mgbalị nna na nne Sommer bụ mgba ọkụ nke dọtara ya nso na imezu nrọ ya. Agbanyeghị, ịrụsi ọrụ ike ya bụ ihe mkpali nke kpalitere ohere ịga nke ọma n'ọrụ ya.
N'ihi ya, akụkọ ndụ ya na -egosi na ọbụlagodi mgbe ndị mmadụ na -akwado ebumnuche anyị, ọ bụ mbọ anyị ga -ekwe nkwa nsonaazụ. Taa, ezinụlọ ya niile na -akwado ya maka imere onwe ya aha n'egwuregwu bọọlụ.
Anyị nwere olile anya na ị nwere ọmarịcha akụkụ akụkọ akụkọ Yann Sommer Childhood Plus Untold Biography Eziokwu. Daalụ maka ịrapara na njedebe nke akụkọ anyị. Ị nwekwara ike ịbanye na ebe ndebe akwụkwọ anyị nke akụkọ na-eme mmụọ Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Ebe a.